जग नहाँसोस्, भ्रमण वर्षमा- विचार - कान्तिपुर समाचार
माघ ११, २०७६ कालीप्रसाद रिजाल
अन्य मुलुकमा सवारी दुर्घटनालाई यदाकदा हुने असामान्य घटनाका रूपमा लिइन्छ । तर हाम्रो राजधानी र अन्य सहरहरूमा सडक दुर्घटना दिनानुदिन हुने नियमित घटना बन्न पुगेको छ । अन्य मुलुकमा सडक दुर्घटना घट्ने क्रममा रहेको पाइन्छ । हामीकहाँ दुर्घटना घट्नु सट्टा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । विचारणीय कुरा त अधिकांश दुर्घटना पैदल यात्रीका लागि बाटो काट्ने प्रयोजनका लागि निर्धारित जेब्राक्रसिङमै हुने गरेका छन् ।
हालैको एक समाचार अनुसार सडक दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएकी चेली तामाङ विगत ३ वर्षदेखि ट्रमा सेन्टरको बेड नं. ५१४ मा बसेर उपचार गराइरहेकी छिन् । जेब्राक्रसिङबाट बाटो काटिरहेको बेला तेजरफ्तारमा आएको मोटरले धक्का दिएपछि उनी सख्त घाइते भएकी थिइन् । अहिलेसम्ममा उनले उपचारमा ८० लाख खर्च गरिसकिन् । अझ कति लाग्ने हो, थाहा छैन । तथ्यांक अनुसार यही मंसिर महिनामा मात्रै ११ जना पदयात्रीले ज्यान गुमाएका छन् । दुर्घटना कम गर्ने प्रयास भइरहेको पढ्न–सुन्न पाइन्छ । तर दुर्घटना भने दिन–प्रतिदिन बढ्ने क्रममा छ ।
सरसर्ती हेर्दा यसको पहिलो कारण बाटो र फुटपाथको दुरवस्था नै हो । सडक निर्माण गर्ने र सडकको स्थितिको अनुगमन गरेर मर्मत–स्याहार गर्ने निकाय नभएका होइनन् । तर खाल्डाखुल्डीले भरिएका अधिकांश सडकहरू सडक भन्नलायक छैनन् । धुलाम्मे, हिलाम्मे सडकले वर्षैभरि राजधानीलाई गिज्याइरहेको जस्तो लाग्छ । स्थानीय बासिन्दाले कतिपटक सडकमै धान रोपाइँ गरेर विरोध प्रदर्शन गरे पनि यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षित भएको पाइँदैन । हुन त कुनै उच्चपदस्थ विदेशी नेताको आगमनको बेला हाम्रा यिनै निकायले एकरातमा कालोपत्रे गरेर आफ्नो कार्यकुशलता देखाइदिएका दृष्टान्त धेरै छन् । तर निकै ठूलो खर्च गरेर हतार–हतार बनाइएका त्यस्ता सडक पाहुना फर्कन नपाउँदै पुन: पहिलेकै दुरवस्थामा पुगेका उदाहरण पाइन्छ ।
उता सडक विस्तारका क्रममा फुटपाथ साँघुरिंँदै गइरहेका छन् । त्यसमा पनि निर्माण सामग्री थुपार्ने कामका साथै फुटपाथमा पसल थापेर व्यापार गर्नेगर्दा पदयात्रीलाई हिँंड्न सकस भइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पदयात्रीहरू फुटपाथबाट सडकमा उत्रिएर यात्रा गर्न बाध्य भइरहेका हुन्छन् । यसरी विचार गर्दा सडकको अवस्थालाई मात्र दुर्घटनाको कारण भन्न सकिन्न । सडक व्यवस्थापन सम्बन्धी हाम्रो मानसिकता र प्राथमिकताको धारणा पनि उत्तिकै जिम्मेदार छ । विकसित मुलुकहरूमा पैदलयात्री त्यसमा पनि बालवृद्धहरूलाई सर्वाधिक प्राथमिकता दिने गरिन्छ । पैदलयात्रीले जेब्रा क्रसिङमा टेक्ने बित्तिकै वाहनहरू तत्काल रोकिन्छन् । सवारी चालकले नै पैदलयात्रीहरूलाई सडकपार गर्नुस् भनेर इसारा गर्छन् । तर हामीकहाँ पैदलयात्रीभन्दा पनि गाडीहरूलाई प्राथमिकता दिएर ट्राफिक सञ्चालन गरिन्छ । उनीहरूको मुख्य प्राथमिकता नै गाडीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो हिँडाएर ट्राफिक जाम हुन नदिनेतर्फ केन्द्रित भइरहेको हुन्छ । फेरि ट्राफिकको इसारा पाउने बित्तिकै दोबाटो, चौबाटोमा पनि कसले उछिनेर पहिले पार गर्ने भनेर गाडीहरूको म्याराथन दौड सुरु हुन्छ ।
अब यो गोलीको पर्रा छुटेको जस्तो वाहनको तँछाड–मछाडमा पैदलयात्रीहरूको लागि चुपचाप रमिता हेर्नुको विकल्प हुँदैन । सडक पार गर्नका लागि पैदलयात्रीहरूको पालो कहिले पनि आउँदैन । कोही अत्यावश्यक कामले हतार परेकाहरू यस्तैमा पनि ज्यान हत्केलामा लिएर सडक पार गर्न तम्सिन्छन् । र गाडी र मोटरसाइकलहरूको चेपाचेपमा परेर ज्यान गुमाउन पुग्छन् । त्यसो त राजधानीको नयाँबानेश्वर, त्रिपुरेश्वर जस्ता कति ठाउँमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दा पैदलयात्रीका लागि पनि बाटो पार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गरिएका उदाहरण छन् । तर यही व्यवस्था अन्यत्र किन हुन नसकेको बुझ्न सकिन्न । यही प्रसंगमा एउटा कुरा विचारणीय हुन आउँछ, हामीकहाँ मान्छेले गरेको भन्दा ट्राफिक बत्तीले गरेको सडक व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी र सुरक्षित सिद्ध भएको छ ।
अर्को कुरा, हामीकहाँ चालक इजाजतपत्र पाउन अत्यन्त कठिन र लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ । चालकको व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक ज्ञान र दक्षताको राम्रो जाँच परीक्षा गरेर प्रमाणपत्र दिने कुरा उपयुक्त हो । तर दुर्घटनाको प्रकृति र अवस्थालाई हेर्दा चालकहरूबाट साधारण गल्ती र लापरबाही नै धेरै हुने गरेको पाइन्छ । दुर्घटनाको प्रकृति र अवस्थालाई विचार गर्दा कुनै अदक्ष सिकारुले मनपरी गाडी चलाएको जस्तो प्रतीत हुन्छ । लामो जाँच पडताल र परीक्षापछि दक्ष र योग्य ठहरिएकालाई चालक प्रमाणपत्र दिने गरिएको अवस्थामा यस्तो त्रुटि कसरी हुने गर्छ ? यो कुरा विचारणीय छ ।
यसका साथै हाम्रोजस्तो भौगोलिक विविधता र विकटता भएको मुलुकमा नियमित रूपमा गाडीचालक र गाडीको जाँच एवं अनुगमन आवश्यक हुन्छ । तर यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन सकिएको पाइँदैन । दुर्घटनाका मुख्य कारणमध्ये लामो यात्रा गर्दा चालक थाकेर उँग्न पुगेको, मादक पदार्थ सेवन गरेको, आवेश र उत्तेजनामा गाडी चलाएको, अप्ठेरो ठाउँमा गाडी ओभरटेक गर्न पुगेको जस्ता मानवीय कारणका साथै गाडीको ब्रेक, गेयर, स्टेरिङजस्ता उपकरणले काम नगरेको आदि पाइन्छ । हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा यस्ता विषयको नियमित जाँच अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही गर्ने परम्परा स्थापित गर्नसके दुर्घटना धेरै हदसम्म कम गराउन सकिन्छ ।
दुर्घटनाको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने प्रचलन हो । हाम्रा वाहनहरूको क्षमता असीमित देखिन्छ । भित्र गाडीमा कोचाकोच गरिएका यात्रु उकुस–मुकुस भएर छट्पटाइरहेका हुन्छन् । तर खलासी भने ठूलो स्वरमा सिट खाली छ भनेर चिच्याइरहेको हुन्छ । अर्को विकल्प नभएकोले त्यस्तै उकुस–मुकुसको कोचाकोचमा यात्रा गर्न यात्रुहरू विवश हुन्छन् । दुर्भाग्यवश, दुर्घटना भएमा ठूलो ज्यानधनको क्षति हुने गर्छ ।
सार्वजनिक यातायातको यस्तो हालत छ भने सार्वजनिक शौचालयको अवस्था झनै दयनीय छ । खुला दिसामुक्त भनेर घोषणा गरे पनि सहर–बजारमा शौचालयको दुरवस्था बयान गरेर साध्य छैन । एकाध ठाउँमा भएका शौचालयको अवस्था हेर्दा भित्र प्रवेश गर्नसमेत गाह्रो हुने स्थिति छ । सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा, सार्वजनिक आवास र सार्वजनिक खानपिनका स्थलहरूलाई आधारभूत आवश्यकताको रूपमा लिने गरिन्छ । तर यसतर्फ कुनै ठोस व्यवस्था र नियमन गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानसकेको छैन । यस्तो स्थितिमा हामी नेपाल भ्रमणवर्ष मनाउने तरखर गरिरहेका छौं । झन्डै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षाका साथ प्रचार–प्रसारमा जुटेका छौं । यति ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउनका लागि के कस्ता आधारभूत सुविधा र साधनस्रोत जुटाउनपर्ने हुन्छ । हाल भएका पूर्वाधार र साधन सुविधाको अवस्था कस्तो छ भन्नेतर्फ समुचित ध्यान गइरहेको देखिंदैन ।
हाम्रो जस्तो प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक सम्पदा र साहसिक मनोरञ्जनका साधन भएको मुलुकका लागि २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य त्यति कठिन देखिँंदैन । तर पर्यटकहरूको बसाइलाई सकेसम्म लम्ब्याएर सुखदपूर्ण बनाउन सकिएन भने यसबाट पर्याप्त लाभ हासिल गर्न कठिन पर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । हामीले ठूलो महत्त्वाकांक्षा राखेका छौं । तर आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ । के हाम्रा तयारीहरू लक्ष्य अनुरुप छन् ? अन्यथा जगहँसाइ हुन बेर छैन । पर्यटकहरूले खाल्डाखुल्डी सडक, अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात, आधारभूत सार्वजनिक सुविधाको अभाव, फोहोर–मैलाको डंगुर, अस्वस्थकर खाद्य पदार्थ, बाटा–बाटामा घेरेर माग्ने र सामान बेच्नेहरूको दुर्व्यवहार र यस्तै दु:खदपूर्ण बसाइको नमिठो अनुभव लिएर फर्कनुपर्‍यो भने भ्रमणवर्ष कतिसम्म सार्थक होला ? बेलैमा ध्यान दिनु उचित होला । भ्रमणवर्ष त सुरु नै भइसक्यो । अब पनि नताते कहिले तात्ने !
प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०८:३५
माघ ११, २०७६ अभि सुवेदी
देशहरूका इतिहासका गति नाप्ने आ–आफ्नै तरिका हुन्छन् । हाम्रा आफ्नै छन् । सबैलाई छुने तरिकाहरूबारे निस्किएका सिद्धान्तहरू पनि छन् । एउटा विषय लिऊँ । कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा मान्न कमिनिष्ट हुँ भनेर फुलेल हुँदै धन कमाउने धन्दामा लागिबस्नु पथभ्रान्त हुनु हो ।
मार्क्सलाई बुझ्नु भनेको तिनले भनेका इतिहास नाप्ने तरिकाहरू हिजो कति उपयुक्त थिए र आज कति उपयुक्त छन् भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नु हो । तिनका सिद्धान्तले भनेका कुराले हेर्दा अहिलेका केही घटना ठिक्क नमिले पनि तिनका मानकलाई लिएर व्याख्या हुने गरेका छन् । विश्वमा अहिले मार्क्सका सिद्धान्तलाई मानक बनाएर हेर्दा केही कुरा भेटिन्छन्, जुन अनेकौं उदाहरणबाट देख्न सकिन्छ । एउटा ‘रिपोर्ट’बाट सुरु गर्छु । त्यसमा मार्क्सका सिद्धान्तको प्रयोग भएको छ र उनका भनाइ यहाँ नौलो सन्दर्भमा मानक भएर आएका छन् ।
ब्रिटेनको पत्रिकाद इकोनोमिस्ट (१६ जनवरी २०२०) को अङ्कमा एउटा शीर्षकले एक्कासी तानिएँ । शीर्षक तीन शब्दको छ, ‘ह्यारी, मेघन र मार्क्स’ जुन आफूलाई मनपर्ने शैली हो । भर्खरैको लेखको तीन शब्दे शीर्षकमा पनि ‘मार्क्स’ प्रयोग गरेको थिएँ । द इकोनोमिस्टमा महारानी एलिजाबेथका नाति ह्यारी र उनकी पत्नी मेघनका राजकीय पहिचान छाडेर आमनागरिक भएर बस्ने योजनाबारे लेखिएको छ । त्यसमा कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा पुँजीवादले सामन्ती पद्धतिका सबै अवशेषहरूलाई ध्वस्त पार्नेछ भनेर लेखिएको भए पनि ब्रिटेनको राजतन्त्रले भने विपरीत वर्गमा बाँडिएर अल्मलिएका शक्तिका स्रोत जनतालाई ‘ग्लु’ वा टाँस्ने तत्त्व भएर जोड्ने काम गरेको देखाएको छ । यसले सामन्तवादपछि पुँजीवाद आउँछ भन्ने कुरालाई उल्टो गरिदियो । तामझाम, ‘रोमान्स, रहस्य र नाटक’ दिएर राजतन्त्रले ब्रिटिस जनतालाई पुँजीवादको यन्त्रको पार्टपुर्जा हुनबाट जोगाएको छ । ह्यारी र मेघनले भने मार्क्सको भनाइ सत्य सावित गर्नै आँटेको अवस्था छ । राजतन्त्रको ‘मोडर्निटी’सँगको तालमेललाई उनीहरूले भत्काउन लागेका छन्, किनकि उनीहरू स्वतन्त्र भएर व्यक्तिगत कमाइ गर्न चाहन्छन् । यसो गरेर उनीहरू राजतन्त्रको घरभित्र नै पुँजीवाद प्रवेश गराइदिन चाहन्छन् । उनीहरू पुँजीवादको अत्यन्त नयाँ रूपको प्रयोग गर्न चाहन्छन् । यो पुँजीवाद राष्ट्रिय हुँदैन, वैश्विक हुन्छ, पक्का हुँदैन, ‘भर्चुअल’ हुन्छ । यसले बजारको निम्ति लगातार नयाँ फेसन र धार बनाइरहन्छ ।
मेघन मनोरञ्जन उद्योग–फिल्मकी मानिस हुन्, जसले प्रयोग गर्ने पुँजीवाद मार्क्सले भविष्यवाणी गरेजस्तै हुनेछ । ‘सबै पवित्र मानिएका कुरा अपवित्र पारिनेछन् । अनि जुन खँदिलो छ, त्यो पग्लिएर तरल हुनेछ ।’ पत्रिका भन्छ, ‘ससेक्स रोयल भन्ने ब्रान्ड यसो सुन्दा अलिक आलु भनेजस्तो सुनिए पनि त्यो हलिउडको स्टार धुलोले चम्किनेछ ।’ भनाइको सार छ, त्यो एक पुँजीवादी बजारमुखी कम्पनी हुनेछ, जसले बेलायती राजतन्त्रलाई नौलो चुनौती दिनेछ । यो ‘ससेक्स रोयल’ कम्पनीलाई ‘हिट’ बनाइराख्न र बढोत्तरी गरिरहन उनीहरूले ब्रिटिस राजसंस्थाबाट ‘भ्यालु’ वा मूल्य बारम्बार थुतेर लिइरहनेछन्, जसमा त्यहाँभित्रका जातिवाद, लैङ्गिक विभेदहरू पनि पर्नेछन् ।
मार्क्सका सिद्धान्त र प्रयोगमा आएका परिवर्तनको ठूलो उदाहरण चीन हो । पछिल्लो समयमा आएर चीनको पुँजी र बजारप्रधान प्रयोगले मार्क्सको घोषणापत्रको सिद्धान्तलाई त्यही लयमा प्रयोग गरेको छैन । एउटा भर्खरैको उदाहरणबाट हेर्छौं । नेपालका कतिपय कमिनिष्ट नेताहरूले अमेरिकी सहयोगको राशि इन्डो–प्यासिफिकसँग जोडिन सक्ने शंकामा यसमाथि बहस गरिरहेको र यो अमेरिकी सहयोग लिँदा चीनको दृष्टि हामीमाथि कस्तो होला भनिरहेको अवस्थामा आकर्षक व्यक्तित्व र बुद्धि भएकी चीनकी राजदूतले यो रकम लिनुहोस्, तपाईंहरूलाई यो धन चाहिन्छ, यसले काम दिन्छ भनेर भिडियो प्रसारणबाट बोलेको सुनेपछि मेरो मनमा अनेकौं कुरा खुले । जनवरी १६ कै वासिङटन पोस्टमा फरिद जकरियाले चीनको विषयमा भनेका कुरा मननयोग्य लागे ।
तिनले लेखेका छन्, ‘चीनले पश्चिमीहरूले सन् १९४५ देखि स्थापित गरेको खुला अन्तर्राष्ट्रिय मानकलाई मानेर नै आर्थिक अभ्यास गरिरहेको प्रस्ट छ । चीन अहिलेको रूसजस्तो पश्चिमी प्रजातन्त्रमाथि हस्तक्षेप गरिबस्ने रोग राज्य होइन । यो अहिले राष्ट्र संघलाई धन दिने दोस्रो शक्ति हो । यसले १९७९ देखि कुनै युद्ध गरेको वा छिमेकीहरूमाथि हमला गर्ने काम गरेको छैन, जसले गर्दा चीनले सुरक्षा परिषदको स्थायी समितिमा एक रेकर्ड नै कायम गरेको छ ।’ फरिदले यसमा मार्क्सवादी चीनको कुरा गरेका छैनन्, एक उत्तरदायी आर्थिक सम्पन्नताको कडी बोकेको राज्यको कुरा गरेका छन् ।
यी सबै उदाहरणको सार हो, नेपालको मार्क्सवादी सरकार, यसका दल, अनि समाजवादी हुँ भन्ने नेपाली कांग्रेसका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दायित्वमा केही समानता हुनुपर्ने हो । तर नेपालको उदाहरण अनौठो छ । राजनीति र समाजको परिवर्तन थोरै समयमा भएको उदाहरण हो, नेपाल । यसमा संलग्नहरू नै शासन चलाउने, प्रतिपक्षमा बस्ने र आर्थिक कारोबार गर्ने जिम्मामा छन्, जुन स्वाभाविक हो । म ती सबै नरनारीलाई सम्मान गर्छु । तर अहिलेको मुख्य डर भनेको संविधानको सहज र प्रभावकारी प्रयोग नहुने हो कि भन्ने हो । अर्को कुरा दिनदिनै विना कुनै रोकटोक बढिरहेको जसरी पनि धन कमाउने दौड हो, जसमा सबै उत्तरदायी नेता, सरकार र ठेकेदारका सञ्जाल पर्छन् । समग्रमा समय उत्साहजनक लाग्दैन । आफू शैक्षिक क्षेत्रको मानिस भएकोले त्यतातिर बढिरहेको बेथितिबाट झन् दु:खित भएको छु । यसबारे लेखिरहनु पर्दैन । यो सर्वविदित र सबैले भनिआएको विषय हो । तर किन कहीँ ठिक बाटोमा केही परिवर्तन हुँदैनन् ? त्यो जटिल प्रश्न भएको छ, नेपालमा ।
मुख्य समस्या नेपालमा समय अनुसार मूल्यहरू परिवर्तन हुन नसक्नु हो । सिद्धान्त एउटा व्यवहार अर्को हुने अहिलेको नेपालको चरित्र हो । एउटा घटना वाचाल छ । भर्खरैको संसदको सभामुखको विषयले जन्माएका एकाध कुरा उठाउन चाहन्छु । कैयौं राजनीतिमा काम गर्ने नेता वा बुद्धिजीवीहरूसँग चिनजान भएको, यिनीहरूमध्ये कति विगतमा आफ्ना विद्यार्थीहरू नै रहेको अनि आफू एक स्वतन्त्र मनुवा भएको कारणले मेरानिम्ति कोही सभामुख हुनु, प्रधानमन्त्री वा अरु केही हुनुसँग केही चाख छैन । तर भर्खरै उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले देशको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अंग संसदको स्वतन्त्रताको निम्ति दिएको अभिव्यक्तिलाई गलत अर्थ लगाइएको अनि अनाहक तिनले प्रश्नहरूको उल्टो सामना गर्नुपरेको अवस्थालाई हामी लिम्बुवानका मानिसहरूले ‘ह्युमिलिएसन’ गर्न खोजेको अर्थमा लिएका छौं ।
राष्ट्रिय तहमा नै कुरा गर्दा शिवमाया अहिलेको उद्बोधनको खडेरी पर्दै गएको नेपालमा एउटा प्रमेथियसको अग्निजस्तो चेतनाको अग्नि लिएर आइन् र मानौँ तिनले हेलिकन पहाडमा उठेर चेतनाको उद्घोष गरिन्— ‘यहाँ गहिरोगरी गाडिएको पितृसत्ता छ, जसलाई उखेल्न राजतन्त्र उखेल्नभन्दा गाह्रो रहेछ ।’ यो उनको आफ्नो लाभको निम्ति बोलिएको विषय थियो भन्ने गलत प्रचार पनि गरिए । यसरी हेर्दा उनको उद्घोषको अर्थ बुझिने छैन । एकछिन पनि संसदलाई नेतृत्वविहीन हुनदिन्न, मेरो दायित्व हो भन्ने उनको कुरालाई आज मूल्यहीन हुँदै गएको धन र लाभका पछि लागेको पुरुषसत्ताले कब्जा गरेको समाजले बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ ।
मेरो निम्ति शिवमाया आफ्नो त्यही ठाउँकी एक तुम्बाहाङ्फे महिला पनि हुन् । नेपालको राजनीतिमा तुम्बाहाङ्फेहरूको योगदान छ । म लिम्बुवानमा हुर्के–बढेको मानिस, मेरो गोधूली काव्यिक र महाकाव्यिक चेतनामा लिम्बु संस्कृति, लय, रंग, ध्वनि गान र कविताको प्रभाव छ । राजनीति भनेको चेतना हो र यो मानिसको कर्म हो, यसलाई मानिसको नैतिकताभन्दा पर लगेर हेर्नु हुँदैन भनेर मलाई सिकाउने गजेन्द्रबहादुर तुम्बाहाङ्फे हुन् । तेह्रथुम जिल्ला कमिनिष्ट पार्टीका सभापति विष्णुकुमार र मेरा कमिनिष्ट दाजु मित्रलालका गुरुसदृश थिए, गजेन्द्र दाइ । तर ती स्वतन्त्र चिन्तनका एक उदाहरण थिए । मैले ८८ वर्षका गजेन्द्रबहादुर दाइलाई २०६८ सालमा उनको निवासमा भेटेको अन्तिम थियो । कान्तिपुरमा लेखेँ । ती केही वर्षपछि दिवंगत भए । पितृसत्तासँग लड्ने विमला तुम्बाहाङ्फे दिदी उनकै बहिनी थिइन् । शिवमायाले संसदको मर्यादा राख्ने विषयमा एक्लै लड्दा एक शब्द पनि नबोल्ने कांग्रेसका महिला नेतृहरूलाई थाहै होला, विमला दिदी अत्यन्त अप्ठ्यारो र परिवर्तन कालमा नेपाली कांग्रेस तेह्रथुम जिल्लाकी सभापति थिइन् । तिनले २०४७ सालको परिवर्तनपछिको स्टेडियमको कांग्रेसको बृहत भेलामा दन्दनाएर भाषण गरेकी थिइन् । म सँगै थिएँ । नेपालको संसदका पहिला चुनाव जितेका कांग्रेसका तेजमान तुम्बाहाङ्फे दाइ ९५ वर्षको उमेरमा सक्रिय र सचेष्ट छन्, म्याङलुङमा ।
शिवमायाले भनिन्, ‘संवैधानिक पदमा रहने व्यक्तिमा स्वतन्त्र रहने साहस हुनुपर्छ ।’ उनको लडाइँ त्यही थियो । सभामुख प्रचण्डका मानिस हुन्छन् वा ओलीका त्यसमा शिवमायाको केही आग्रह थिएन । उनले संविधानसम्मत धैर्य गर अनि आफू निर्णय गरेर आओ भनेकी थिइन् । संवैधानिक स्थानमा रहने व्यक्ति स्वतन्त्र रहनुपर्छ भन्ने उनको आह्वान त्यस्तो नरहनेको निम्ति अबदेखि चुनौती भएको छ । त्यही आचरण भत्किँदै गएको देखेकी डा. शिवमायाको यो सन्देश एउटा घटना हो, लोकतन्त्रको ।
प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०८:३३